International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Media Advisory: Launch of the "Report on Public Opinion on Yard & Village Administration Law"
Media Advisory: Launch of the "Report on Public Opinion on Yard & Village Administration Law"
Launch of the "Report on Public Opinion on Yard & Village Administration Law"
၄ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ (ACDD) သည် "ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူထုသဘောထားအမြင်" အမည်ရှိအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် တက်ရောက်ပါဝင်ပေးပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ် ပါသည်။ ACDD သည် ရဟန်းသံဃာများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဝင်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ လယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရပ်ရွာလူထုအခြေပြု ကွန်ယက် စုစုပေါင်း ၁၈ ခု စုပေါင်းထားသော မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်များသည် လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်နေပြီး ယခုအစီရင်ခံစာသည် ACDD စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ပထမဆုံး အကြိမ် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာပါ တွေ့ရှိချက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လမှ သြဂုတ်လ ကာလအတွင်း ပြည်နယ် (၃) ခု နှင့် တိုင်းဒေသကြီး (၆) ခု အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၇၂) ခုမှ အမျိုးသား (၁၀၄၀) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၅၉၄) ဦးတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူထုသဘောထားအမြင်ကို သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။
နေ့ရက်/အချိန် - ၇ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၄ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ - မွန်းလွဲ (၁:၀၀) နာရီထိ
နေရာ - စကားဝါခန်းမ၊ အမှတ် ၄၉၈၊ အခန်းနံပတ် ၂၀၈၊ ဒုတိယထပ်၊ တိုက်အမှတ် E ၊ Diamond Condominium (လှည်းတန်း ကုန်းကျော်တံတားအနီး) ပြည်လမ်းမ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဇွန်ပန်း (ACDD)၊ အောင်မင်း (ACDD)၊ ရဲကျော်သူ (ACDD)၊ ဦးဝင်းချို
သတင်းမီဒီယာများနှင့် အပြန်အလှန် အမေးအဖြေပြုလုပ်ခြင်း
မှတ်ချက် - ဤအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာပြန်လိုအပ်သူများ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဘာသာပြန်ခေါ်လာကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် - ကိုကောင်းကောင်း (၀၉၄ ၂၃၆ ၉၅၉၂၁)၊ ကိုမောင်ဦး (၀၉၃ ၁၀၂ ၃၅၀၂)၊ ကိုအောင်မြင် (၀၉၂ ၅၉၀ ၃၈၂၂၈)
Action Committee for Democracy Development (ACDD) is pleased to invite you toapress conference for the launch of the "Report on Public Opinion on Yard & Village Administration Law"
ACDD isacoalition of 18 community-based social and political networks comprised of monks, members of ethnic minorities, youth, women, former political prisoners, farmers and fishermen. The release of the report marks the first publication of the coalition since it was founded.
The report isaresult of interviews with 1040 men and 594 women from 72 townships across3States and6Regions of Burma (Myanmar) during the period of June-August 2014 and offers public opinion on yard and village administration law.
When: 10:00am – 1:00pm,7December 2014 (Sunday)
Where: Grand Hall Sagawa, No. 498, Room 208, 2nd Floor, Building (E), Diamond Condominium, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon
Speakers: Zun Pann (ACDD), Aung Myin (ACDD), Ye Kyaw Thu (ACDD), U Win Cho
Question and Answers with Media
Note: The session will only be in Burmese and we encourage Non-Burmese speakers to accompanyatranslator.
More information please contact Ko Kaung Kaung (094 236 95921), Ko Maung Oo (093 102 3502), Ko Aung Myint (092 590 38228)